भेरीमा छैन, खाली बेड – sunpani.com
भेरीमा छैन, खाली बेड
सुनपानी । १० बैशाख २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोनाका विरामीले अर्को विरामी डिस्चार्ज भएपछि मात्रै बेड पाउने अवस्था आएको छ ।
अस्पतालमा रहेको १ सय ४२ बेड भरिभराउ भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रकाश थापाले एक सय ४२ बेड भरिएर राख्न मिल्ने ठाउँहरुमा एस्ट्रा बेड राखेर पनि भरिसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘अब त कुनै विरामी डिस्चार्ज नभएसम्म नयाँ विरामीलाई लिने ठाउँ नै छैन, मेसु डा. थापाले भन्नुभयो, पालो कुर्ने अवस्था पनि छैन ।’
नेपालगञ्जमा हिजोमात्रै ३ सय ८८ जना संक्रमित थपिएका थिए । दैनिक यत्तिका संख्यामा विरामी थप भइरहने तर अस्पतालको बेड क्षमता बढाउन चासो नदिने स्थितिले कोरोना भयावह बन्ने खतरा बढेको छ । मेसु डा. थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘स्थिति नियन्त्रण बाहिर । कोभिडको लागि छुट्याएर राखिएका सम्पूर्ण १४२ बेडहरु पूर्णरुपमा भरिभराउ । संक्रमित विरामीको आउने क्रम जारी छ । हामी मुखदर्शक भएर बस्ने बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । हरेकले आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
नेपालगञ्जमा भेरी र मेडिकल कलेजले मात्रै कोरोनाका विरामीलाई राखेका छन् । अन्य ठूला अस्पतालहरुमा पनि विरामीलाई राख्न जरुरी भइसकेको छ ।
भेरीमा मात्रै दैनिक तीन सय वटासम्म अक्सिजन सिलिण्डर खपत हुन थालेको छ । धेरैजसो विरामीलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ ।
नेपालगञ्जमा छिटो भन्दा छिटो अक्सिजनसहितको थप कोरोना बेड तयार नगरे ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने खतरा बढेको छ । भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताल भन्नुहुन्छ, ‘जिम्मेवार कोही बन्न सकेनन् । अक्सिजन लेबल ८६ भएका विरामीलाई पनि आँखाभरी आँशु लिएर बेड छैन भन्नु परेको छ ।’
कोरोनाको चेक ब्रेक गर्न नेपालगञ्जमा लकडाउन गरिएको छ । जिल्लामा थपिने, भारतबाट आउने र बाहिरी जिल्लाबाट उपचार गराउन आउने विरामीको चाप यहाँ बढ्दो नै रहेको छ । यहीका र बाहिरी जिल्लाका गरी दैनिक तीन जनासम्मको मृत्यु भइरहेको छ ।